2 Oct 2018 . 12:39 PM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံတစ်နေ့လုပ်ခဟာ ၄,၈ဝဝကျပ် ဖြစ်ပြီး တစ်နာရီလုပ်ခဟာ ၆ဝဝကျပ် ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလစာဟာ ၁၄၄,ဝဝဝ ကျပ် (တစ်သိန်းလေးသောင်းလေးထောင်) ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလစာဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
သြစတေးလျနိုင်ငံ (Australia) နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လုပ်ခလစာအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈,၇၆၈ အထိရှိပြီး အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၃၉၇ (၃,၆၇၉,၃၉၅ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ အခြေခံလစာဟာ သိန်းသုံးဆယ်ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ဗျာ။
ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ (Luxembourg) ဟာ သေးငယ်ပေမယ့် အလုပ်သမားတွေအတွက် နေချင်စရာပါ။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇,ဝ၉ဝ အထိရှိပါတယ်။ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အနည်းဆုံးလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၂၅၇ (၃,၄၆၅,၂၆၂ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေတောင်မှ သိန်းသုံးဆယ်ကျော်ရတယ်ဆိုတော့ . . .
ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ ဘေးချင်းကပ်နေတဲ့ မိုနာကိုနိုင်ငံ (Monaco) ရဲ့လူဦးရေဟာ လေးသာင်းနီးပါးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်ငံငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ မိုနာကိုနိုင်ငံက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၉၅၇ (၃,ဝဝ၄,၃၇၈ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် အနည်းဆုံး သိန်းသုံးဆယ်လောက် ရမှာမို့လို ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ (France) ရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ဝ,၂၇၂ ရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၆၈၉ (၂,၅၉၃,၁၂၆ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ သာမန်ဝန်ထမ်းလုပ်ရုံနဲ့ နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းကျော်ရမှာဆိုတော့။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ (New Zealand) ရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅,၅၂၁ အထိရှိပါတယ်။ ဒီနှုန်းထားဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံထက် မြင့်မားပေမယ့် အခွန်ကြေးမြင့်တဲ့အတွက် ပဉ္စမနေရာမှာ ထားတာပါ။ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေခံလစာဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၁၂၆ (၃,၂၆၄,၅၆၁ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရုံနဲ့ သုံးဆယ့်နှစ်သိန်းပါပဲ။ နယ်သာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံတွေကလည်း သူတို့နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ။
(၁) သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတွေကို အခြေခံလစာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁,ဝဝဝ (၁,၁၃၉,ဝဝဝ ကျပ်) အနည်းဆုံးပေးချေရမယ်လို့ ၂ဝ၁၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကို အခြေခံလစာ ဒေါ်လာ ၁,၁ဝဝ (၁,၂၅၂,၉၃၈ ကျပ်) အနည်းဆုံးပေးချေရမယ်လို့ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောက စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း (ဒါမှမဟုတ်) လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း သွားလုပ်ရုံနဲ့ အနည်းဆုံး ဆယ့်သုံးသိန်းလောက်ရနိုင်တဲ့သဘောပါ။
အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ (Thailand) ရဲ့ အခြေခံတစ်နှစ်လုပ်ခက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၇၅၈ ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေခံလစာက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၉ (၃၅၂,၇၉၄ ကျပ်) ရှိပါတယ်။ မြန်မာကျပ် သုံးသိန်းခွဲနီးပါးရတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထက်စာရင် နှစ်ဆကျော်ပိုများတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အခြေခံတစ်နာရီလုပ်ခကို ၈၄၈ယန်း (၁၁,၆၅၁ ကျပ်) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တစ်နာရီလုပ်ရုံနဲ့ တစ်သောင်းကျော် ရမှာပါ။ တစ်ပတ်အလုပ်ချိန် နာရီ (၄ဝ) သတ်မှတ်ထားပြီး အခြေခံလစာဟာ ၁၃၅,၆၈ဝ ယန်း (၁,၈၆၄,၂၄၃ ကျပ်) အထိ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူထက်စာရင် ဂျပန်နိုင်ငံက လစာပိုများတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာဒေသအပေါ်မူတည်ပြီး တိုကျိုမြို့ (Tokyo) ၊ ကာနာဂါဝါမြို့ (Kanagawa) နဲ့ အိုဆာကာမြို့ (Osaka) တွေမှာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက လစာပိုများပါတယ်လို့ သိရပြန်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံလစာသတ်မှတ်ချက်ဟာ နေရာဒေသပေါ်လိုက်ပြီး ကွာခြားပါတယ်။ ပင်နီဆူးလားကျွန်း (Peninsula) ပေါ်မှာရှိတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ အခြေခံလစာ ရင်းဂစ် ၁,ဝဝဝ (၃၇၇,၉၃ဝ ကျပ်) ပေးချေရမယ်လို့ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လတုန်းက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆာဘားပြည်နယ် (Sabah) ၊ ဆာရာဝက်ပြည်နယ် (Sarawak) နဲ့ ဘာဘူအမ်ပြည်နယ် (Labuan) တွေမှာတော့ အခြေခံလစာ ရင်းဂစ် ၉၂ဝ (၃၄၇,၆၉၅ ကျပ်) သာ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် အနည်းဆုံး သုံးသိန်းခွဲရနိုင်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ (South Korea) ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ ကဲ . . . ဒါဆို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အနည်းဆုံးလုပ်ခက ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါပြီ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အခြေခံလုပ်ခကို နှစ်စဉ်တိုးမြှင့်လေ့ရှိတာပါ။ အခြေခံတစ်နာရီလုပ်ခဟာ ဝမ် ၇,၅၃ဝ (၁ဝ,၅၄၂ ကျပ်) အဖြစ် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ သက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ရောက်ရင်တော့ အခြေခံတစ်နာရီလုပ်ခဟာ ၈,၃၅ဝ ဝမ် (၁၁,၆၉ဝ ကျပ်) ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ တစ်ပတ်အလုပ်ချိန် နာရီ (၄ဝ) သတ်မှတ်ထားပြီး ၂ဝ၁၈ခုနှစ်မှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံလစာဟာ ၁,၅၇၃,၇၇ဝ ဝမ် (၂,၂ဝ၃,၂၇၈ ကျပ်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ရုံနဲ့ အနည်ဆုံး သိန်းနှစ်ဆယ်ကျော်မှာဆိုတော့ မျက်စိကျချင်စရာပါပဲ။ အချိန်ပိုကြေးပါ ပေါင်းလိုက်ရင် သိန်းသုံးဆယ်ကျော်ရကြပါတယ်။
ကဲ . . . . . အခရာပရိသတ်ကြီးရေ . . ကမ္ဘာပေါ်မှာ လုပ်ခလစာအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်သွားလုပ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခြေခံလုပ်ခတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပြထားတာပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းထဲမှာ နိုင်ငံခြားကို အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်း အခြေခံလုပ်ခအကြောင်းကို လက်တို့ပြောလိုက်ပါဦး။
Photo Credit – Aviation Week
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခွခေံတဈနလေု့ပျခဟာ ၄,၈ဝဝကပျြ ဖွဈပွီး တဈနာရီလုပျခဟာ ၆ဝဝကပျြ ရှိတယျလို့ သတျမှတျထားပါတယျ။ အဲဒီတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အခွခေံလစာဟာ ၁၄၄,ဝဝဝ ကပျြ (တဈသိနျးလေးသောငျးလေးထောငျ) ရှိတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အခွခေံလစာဟာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ဘယျလောကျထိရှိလဲဆိုတာ ကွညျ့ရအောငျ။
သွစတေးလနြိုငျငံ (Australia) နိုငျငံဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ လုပျခလစာအမွငျ့ဆုံးနိုငျငံလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။ အလုပျသမားတှရေဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၈,၇၆၈ အထိရှိပွီး အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂,၃၉၇ (၃,၆၇၉,၃၉၅ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ သွစတေးလနြိုငျငံမှာ သနျ့ရှငျးရေးလုပျနတေဲ့ အခွခေံလစာဟာ သိနျးသုံးဆယျကြျောရှိတယျဆိုတော့ စဉျးစားသာကွညျ့တော့ဗြာ။
ဥရောပတိုကျမှာရှိတဲ့ လူဇငျဘတျနိုငျငံ (Luxembourg) ဟာ သေးငယျပမေယျ့ အလုပျသမားတှအေတှကျ နခေငျြစရာပါ။ အလုပျသမားတှရေဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၇,ဝ၉ဝ အထိရှိပါတယျ။ လူဇငျဘတျနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့အနညျးဆုံးလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂,၂၅၇ (၃,၄၆၅,၂၆၂ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ သူတို့နိုငျငံမှာ အောကျခွဝေနျထမျးတှတေောငျမှ သိနျးသုံးဆယျကြျောရတယျဆိုတော့ . . .
ပွငျသဈနိုငျငံနဲ့ ဘေးခငျြးကပျနတေဲ့ မိုနာကိုနိုငျငံ (Monaco) ရဲ့လူဦးရဟော လေးသာငျးနီးပါးပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရနိုငျငံငယျဖွဈတဲ့အတှကျ ဝနျထမျးတှကေို အကောငျးဆုံးထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ မိုနာကိုနိုငျငံက ဝနျထမျးတှရေဲ့အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁,၉၅၇ (၃,ဝဝ၄,၃၇၈ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ သူတို့နိုငျငံမှာ အလုပျသှားလုပျရငျ အနညျးဆုံး သိနျးသုံးဆယျလောကျ ရမှာမို့လို ပြျောစရာကွီးပေါ့ဗြာ။
ပွငျသဈနိုငျငံ (France) ရဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂ဝ,၂၇၂ ရှိပါတယျ။ ပွငျသဈနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ ဝနျထမျးတဈယောကျရဲ့ အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁,၆၈၉ (၂,၅၉၃,၁၂၆ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ ပွငျသဈနိုငျငံမှာ သာမနျဝနျထမျးလုပျရုံနဲ့ နှဈဆယျ့ငါးသိနျးကြျောရမှာဆိုတော့။
နယူးဇီလနျနိုငျငံ (New Zealand) ရဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၅,၅၂၁ အထိရှိပါတယျ။ ဒီနှုနျးထားဟာ ပွငျသဈနိုငျငံထကျ မွငျ့မားပမေယျ့ အခှနျကွေးမွငျ့တဲ့အတှကျ ပဉ်စမနရောမှာ ထားတာပါ။ ဝနျထမျးတဈယောကျရဲ့ အခွခေံလစာဟာ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂,၁၂၆ (၃,၂၆၄,၅၆၁ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ နယူးဇီလနျနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျခှငျ့ရရုံနဲ့ သုံးဆယျ့နှဈသိနျးပါပဲ။ နယျသာလနျ၊ ဘယျလျဂြီယံနဲ့ ဂြာမဏီနိုငျငံတှကေလညျး သူတို့နဲ့ မတိမျးမယိမျးပါပဲ။
(၁) သနျ့ရှငျးရေးဝနျထမျးတှကေို အခွခေံလစာ စင်ျကာပူဒျေါလာ ၁,ဝဝဝ (၁,၁၃၉,ဝဝဝ ကပျြ) အနညျးဆုံးပေးခရြေမယျလို့ ၂ဝ၁၄ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလကတညျးက သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။
(၂) လုံခွုံရေးဝနျထမျးတှကေို အခွခေံလစာ ဒျေါလာ ၁,၁ဝဝ (၁,၂၅၂,၉၃၈ ကပျြ) အနညျးဆုံးပေးခရြေမယျလို့ ၂ဝ၁၆ခုနှဈ စကျတငျဘာလမှာ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ ဆိုလိုတဲ့ သဘောက စင်ျကာပူနိုငျငံမှာ သနျ့ရှငျးရေးဝနျထမျး (ဒါမှမဟုတျ) လုံခွုံရေးဝနျထမျး သှားလုပျရုံနဲ့ အနညျးဆုံး ဆယျ့သုံးသိနျးလောကျရနိုငျတဲ့သဘောပါ။
အိမျနီးခငျြး ထိုငျးနိုငျငံ (Thailand) ရဲ့ အခွခေံတဈနှဈလုပျခက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂,၇၅၈ ရှိပါတယျ။ ဝနျထမျးတှရေဲ့ အခွခေံလစာက အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၉ (၃၅၂,၇၉၄ ကပျြ) ရှိပါတယျ။ မွနျမာကပျြ သုံးသိနျးခှဲနီးပါးရတာဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံထကျစာရငျ နှဈဆကြျောပိုမြားတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံမှာ အခွခေံတဈနာရီလုပျခကို ၈၄၈ယနျး (၁၁,၆၅၁ ကပျြ) အဖွဈ သတျမှတျထားပါတယျ။ တဈနာရီလုပျရုံနဲ့ တဈသောငျးကြျော ရမှာပါ။ တဈပတျအလုပျခြိနျ နာရီ (၄ဝ) သတျမှတျထားပွီး အခွခေံလစာဟာ ၁၃၅,၆၈ဝ ယနျး (၁,၈၆၄,၂၄၃ ကပျြ) အထိ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ စင်ျကာပူထကျစာရငျ ဂပြနျနိုငျငံက လစာပိုမြားတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နရောဒသေအပျေါမူတညျပွီး တိုကြိုမွို့ (Tokyo) ၊ ကာနာဂါဝါမွို့ (Kanagawa) နဲ့ အိုဆာကာမွို့ (Osaka) တှမှော အလုပျလုပျရတဲ့ ဝနျထမျးတှကေ လစာပိုမြားပါတယျလို့ သိရပွနျပါတယျ။
မလေးရှားနိုငျငံရဲ့ အခွခေံလစာသတျမှတျခကျြဟာ နရောဒသေပျေါလိုကျပွီး ကှာခွားပါတယျ။ ပငျနီဆူးလားကြှနျး (Peninsula) ပျေါမှာရှိတဲ့ ပွညျနယျတှမှော အခွခေံလစာ ရငျးဂဈ ၁,ဝဝဝ (၃၇၇,၉၃ဝ ကပျြ) ပေးခရြေမယျလို့ ၂ဝ၁၆ခုနှဈ ဇူလိုငျလတုနျးက သတျမှတျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆာဘားပွညျနယျ (Sabah) ၊ ဆာရာဝကျပွညျနယျ (Sarawak) နဲ့ ဘာဘူအမျပွညျနယျ (Labuan) တှမှောတော့ အခွခေံလစာ ရငျးဂဈ ၉၂ဝ (၃၄၇,၆၉၅ ကပျြ) သာ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ မလေးရှားနိုငျငံမှာ အလုပျသှားလုပျရငျ အနညျးဆုံး သုံးသိနျးခှဲရနိုငျပါတယျ။
အခုနောကျပိုငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ (South Korea) ကို အလုပျလုပျဖို့ စိတျဝငျစားလာကွပါတယျ။ ကဲ . . . ဒါဆို တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အနညျးဆုံးလုပျခက ဘယျလောကျလဲဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါပွီ။ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အခွခေံလုပျခကို နှဈစဉျတိုးမွှငျ့လရှေိ့တာပါ။ အခွခေံတဈနာရီလုပျခဟာ ဝမျ ၇,၅၃ဝ (၁ဝ,၅၄၂ ကပျြ) အဖွဈ ၂ဝ၁၈ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၁) ရကျနမှေ့ာ သကျမှတျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂ဝ၁၉ ခုနှဈရောကျရငျတော့ အခွခေံတဈနာရီလုပျခဟာ ၈,၃၅ဝ ဝမျ (၁၁,၆၉ဝ ကပျြ) ဖွဈလာတော့မှာပါ။ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာ တဈပတျအလုပျခြိနျ နာရီ (၄ဝ) သတျမှတျထားပွီး ၂ဝ၁၈ခုနှဈမှာ ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အခွခေံလစာဟာ ၁,၅၇၃,၇၇ဝ ဝမျ (၂,၂ဝ၃,၂၇၈ ကပျြ) ဖွဈပါတယျ။ ကိုရီးယားနိုငျငံမှာ အလုပျလုပျရုံနဲ့ အနညျဆုံး သိနျးနှဈဆယျကြျောမှာဆိုတော့ မကျြစိကခြငျြစရာပါပဲ။ အခြိနျပိုကွေးပါ ပေါငျးလိုကျရငျ သိနျးသုံးဆယျကြျောရကွပါတယျ။
ကဲ . . . . . အခရာပရိသတျကွီးရေ . . ကမ်ဘာပျေါမှာ လုပျခလစာအမွငျ့ဆုံးနိုငျငံတှနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အလုပျသှားလုပျကွတဲ့ နိုငျငံတှမှော သတျမှတျထားတဲ့ အခွခေံလုပျခတှကေို ရှာရှာဖှဖှေေ တငျပွထားတာပါ။ ကိုယျ့သူငယျခငျြးထဲမှာ နိုငျငံခွားကို အလုပျလုပျခငျြတဲ့သူတှရှေိရငျလညျး အခွခေံလုပျခအကွောငျးကို လကျတို့ပွောလိုကျပါဦး။